Oovimba abagcina i-Intanethi-192.168.8.1
Jonga amandla esignali yeWiFi -Ukuba umnatha wakho ubonakala ucotha okanye iphepha lewebhu alizukulayisha, ingxaki inokuba sisikhonkco sakho seWi-Fi. Mhlawumbi ukude kakhulu kwisixhobo, okanye izahlulelo ezingqingqwa ziphazamisa umqondiso. Jonga nje amandla akho ngqo e-Wi-Fi.
Kutheni Amandla oMqondiso weWiFi esenza umahluko
Uphawu olomeleleyo lweWi-Fi lubonisa ikhonkco elinokuthenjwa ngakumbi. Oku kwenza ukuba uthathe isibonelelo esipheleleyo kwisantya se-intanethi esifumaneka kuwe. Amandla esignali yeWi-Fi axhomekeke kuluhlu lwezinto, umzekelo, ukuba ukude kangakanani kwi-router, nokuba kukudibana okungu-5ghz okanye 2.4, kunye nohlobo lweendonga ezikufutshane nawe. Okufuphi xa usiya kwi-router, ikhuselekile. Njengonxibelelwano olungu-2.4ghz oluqhubeka lusasazwa, banokuba neengxaki zokuphazamiseka. Iindonga ezomeleleyo ezenziwe ngezinto ezixineneyo (ezinje ngekhonkrithi) ziya kuthintela isiginali yeWi-Fi. Umqondiso obuthathaka, endaweni yoko, ukhokelela kwisantya esicothayo, ukuphuma esuthwini, kwaye nakwiimeko ezimbalwa zokumisa okupheleleyo.
Ayisiyiyo nganye inkathazo yoqhagamshelo sisiphumo samandla esignali ebuthathaka. Ukuba umnatha kwifowuni yakho okanye kwithebhulethi uyacotha, qalisa ngokuqalisa kwakhona i-router ukuba unokufikelela kuyo. Ukuba umba uyaqhubeka, eli nyathelo lilandelayo kukuqinisekisa ukuba ngaba iWi-Fi ngumba lowo. Zama ukusebenzisa i-intanethi ngesixhobo esiqhagamshelwe nge-Ethernet. Okwangoku ukuba uneengxaki, inethiwekhi yingxaki. Ukuba ikhonkco le-Ethernet lilungile kwaye ukuseta kwakhona i-router akuzange kuncede, lixesha lokuba ujonge amandla esignali.
Sebenzisa iNkqubo yokuSebenza eyakhelwe ngaphakathi
IMicrosoft yeWindows kunye nezinye iinkqubo ezinesixhobo esakhelwe-ngaphakathi esweni unxibelelwano lwenethiwekhi. Le yeyona ndlela ikhawulezayo neyona ilula yokulinganisa amandla e-Wi-Fi.
Kwiinguqulelo ezintsha zeWindows, khetha i-icon yenethiwekhi kwibar yomsebenzi ukuze ubone inethiwekhi engenazingcingo onxibelelana nayo. Kukho imivalo emihlanu ebonisa amandla oxhulumaniso, apho olunye ludibaniso oluhlwempuzekileyo kwaye ezintlanu zezona zilungileyo.
Sebenzisa i-Tabletor Smartphone
Esinye isixhobo esiphathwayo esine-intanethi esineyunithi kuseto esibonisa amandla enethiwekhi e-Wi-Fi kuluhlu. Umzekelo, kwi-iPhone, yiya kuseto lwe-app, ngoku ndwendwela i-Wi-Fi ukuze ujonge amandla wenethiwekhi ye-Wi-Fi okhoyo kunye namandla wesiginali wenethiwekhi ekuluhlu.
Yiya kwiNkqubo yokuSebenzisa yee-adaptha zakho ezingenazingcingo
Bambalwa abavelisi bee-network zenethiwekhi ezingenazingcingo okanye ii-PC zeencwadana ezinikezela ngeeapps zesoftware ezijonga amandla omqondiso ongenazingcingo. Iiapps ezinjalo zazisa amandla esignali kunye nomgangatho osekwe kwinani ukusuka kwiipesenti ezi-0 ukuya kwezili-100 kunye neenkcukacha ezongezelelekileyo ezilungiselelwe ngokukodwa izixhobo zekhompyutha.
Inkqubo yokufumana i-Wi-Fi yenye yeNketho enye
Isixhobo esifumana indawo yeWi-Fi sijonga amaza erediyo kwindawo engummelwane kwaye sifumane amandla esignali okusondela kwiindawo zokungena ngaphandle kwamacingo. Umtshini we-Wi-Fi wesini ngesimo se-hardware esincinci esifanelekileyo kwikhonkco.
Uninzi lwenkqubo yokufumana i-Wi-Fi isebenzisa iseti phakathi kwe-4 kunye ne-6 ye-LEDs ukubonisa amandla esignali kwiiyunithi zemivalo ezinje ngesixhobo seWindows. Ayizithandi ezi ndlela zingasentla, kodwa izixhobo zenkqubo yeWi-Fi azilinganisi amandla oqhagamshelo kodwa endaweni yayo, qikelela nje amandla onxibelelwano.
iindidi Uluhlu lweintanethi Ushiye uluvo
Lungisa iiNdawo eziFileyo ze-WiFi- A. Indawo efileyo yeWiFi Ngokusisiseko indawo ngaphakathi ekhayeni lakho, kwisakhiwo, kwindawo yokusebenza, okanye nakwezinye iindawo ekulindeleke ukuba zigutyungelwe yi-Wi-Fi, kodwa ayisebenzi apho - izixhobo azikwazi ukunxibelelana nenethiwekhi. Ukuba uthatha igajethi kwindawo efileyo- mhlawumbi usebenzisa ithebhulethi okanye i-smartphone kwaye ungene ngaphakathi kwigumbi apho kukho indawo efileyo- iWi-Fi iyayeka ukusebenza kwaye awuzukufumana miqondiso. -Fi yasungulwa, ke ngoko zinokwakhiwa ngeendlela eziphazamisa i-Wi-Fi. Izinto ezinkulu zesinyithi ezinjengeendonga zentsimbi okanye iikhabhathi zefayile zinokuthintela imiqondiso ye-Wi-Fi.
Iindlela zokuLungisa iiNdawo eziFileyo zeWiFi
Apha ngezantsi kukho iingcebiso ezimbalwa zokugubungela i-Wi-Fi yakho.
Ukuba i-router ikwikona enye yendlu yakho, indlu, okanye indawo yokusebenzela kwaye kukho indawo efileyo kwenye ikona yendlu yakho, zama ukuhambisa i-router kwindawo entsha embindini wendlu yakho, indlu, okanye indawo yokusebenzela.
Lungisa i-Antenna yeRouter yakho
Qinisekisa ukuba i-eriyali yendlela yakho engenazingcingo iphakamile kwaye yalatha ngokuthe nkqo. Ukuba ikhombe ngokuthe tye, awuyi kufumana ubungakanani obufanayo bokubhengeza.
Indawo kunye nokufudusa iibhlokhi
Ukuba i-router yakho ye-Wi-Fi igcinwe ngaphandle kwekhabhathi yefayile yesinyithi enciphisa amandla omqondiso. Zama ukuphinda ubeke indawo yakho ukuze ube namandla esignali kwaye ubone ukuba oko kususa indawo efileyo.
Guqula kwiNethiwekhi engenazingcingo engenantambo
Sebenzisa igajethi enje nge-Android okanye kwi-SSIDer yeWifi Analyzer Mac okanye yeWindows ukufumana inethiwekhi engenazingcingo engenazingcingo kwinethiwekhi yakho ye-Wi-Fi, ngokulandelayo utshintshe useto kumzila ukunciphisa ukungena kwamanye amanethiwekhi angenazingcingo.
Misela uMphindi ongenazingcingo
Kuya kufuneka usete ukuphindaphinda ngaphandle kwamacingo okwandisa ukogquma indawo enkulu ukuba akukho nanye kwezi ngcebiso zingasentla zincedayo. Oku kunokuba kubalulekile kwiiofisi ezinkulu okanye ezindlwini.
Sebenzisa ikhonkco elinentambo ukulungisa iiNdawo eziFileyo zeWiFi
Usenokucinga nokuseta iingcingo ze-Intanethi ezikwi-Intanethi. Umzekelo, ukuba unogutyungelwano olukhulu ngaphandle kwamacingo kwikhaya lakho lonke, kodwa awunakubonakala ufumana isiginali ye-Wi-Fi ngaphakathi kwigumbi lakho lokulala- mhlawumbi uneentambo zenkuku zesinyithi ngaphakathi kweendonga. Ungaqhuba intambo ye-Ethernet ukusuka kwi-router uye kwigumbi lakho lokulala, okanye ngesibini sezihlanganisi zamandla ombane ukuba awunqweneli kangako ukubona iintambo ezibhadulayo kwindinyana, emva koko usete irutha engenazingcingo ngaphakathi kwigumbi. Kuya kufuneka emva koko ungene ngaphandle kwe-intanethi kwigumbi elingenanto ngaphambili.
Ukuba unemimandla efileyo engenazingcingo inokuxhomekeka kwi-router, indawo ekuyo, abamelwane bakho, ukuba zakhiwe phi iindonga zendlu yakho, ubungakanani bendawo yakho yokugubungela, iintlobo zezixhobo ze-elektroniki onazo, nalapho izinto zibekwe khona. Kukho okwaneleyo okunokubangela iingxaki, kodwa uvavanyo kunye nempazamo ziya kukunceda ucofe ingxaki.
Iindawo ezingasasebenziyo ezingenazingcingo azilulanga ukubona ukuba uhamba kufutshane nekhaya lakho, iofisi okanye indlu. Emva kokuba uzifumene, ungalinga uluhlu lwezisombululo kwaye ulungise nantoni na ebangela ingxaki.
An Idilesi ye-Intanethi Ithegi yamanani enikezelwe kuzo zonke izixhobo ezinxulumene nenethiwekhi yePC esebenzisa iProtokholi ye-Intanethi ukuhambisa. Idilesi ye-IP ibonelela ngeenjongo ezimbini eziphambili: ujongano lwenethiwekhi okanye isazisi somamkeli kunye nedilesi yendawo.
Idilesi ye-IP eyabelwe i-PC yinethiwekhi okanye idilesi ye-IP eyabelwe igajethi yenethiwekhi ngumthengisi wemveliso. Izixhobo zokunxibelelana zisetelwe kwidilesi ethile ye-IP emiselweyo; umzekelo, ii-routers ze-Linksys zabelwe idilesi ye-IP 192.168. 1.1
Ukuba unqwenela ukuya kwindawo yokwenyani, ucela idilesi yayo kwaye uyibeke kwi-GPS. Emva kokuba unqwenela ukuya kwindawo ekwi-intanethi, ude ubuze idilesi yayo, kwaye uyibhale kwi-bar ye-URL yesikhangeli sakho sewebhu.
Indlela yokufumana idilesi ye-IP emiselweyo ye-WIFI inikwe apha ngezantsi:
Wonke umenzi we-router unedilesi ye-IP yokungena ngokungagqibekanga eqaphelekayo kwisiseko sehardware ye-router. Ukuba ayibhalwanga apho, unokuyifumana kwixwebhu okanye kwincwadana yemiyalezo eza ne-router emva kokuba uyithengile.
Ukuba i-ISP ikulungiselela nge-router ke iya kukuxelela ngokuzenzekelayo idilesi ye-IP kunye nee-ID ukungena kwi-router kwaye ungene kwi-Intanethi.
Indlela yokufumana igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha?
Ii-ID zokungena ngokungagqibekanga zinokufumaneka kwi-handbook ye-router efika kunye ne-router emva kokuba uqale uyithenge kwaye uyixhume.
Ngokwesiqhelo, ukulungiselela ubuninzi bee-routers, ii-ID ezingagqibekanga zombini "admin" kunye "admin". Kodwa, oku kuchongwa kunokutshintsha kuxhomekeke kumenzi we-router.
ukuba ulahlekelwe yincwadi yesandla, emva koko umntu unokufumana ii-ID ezingagqibekanga kuye njengehardware yendlela njengoko ziya kuprintwa ngasemva kwirutha nganye.
Xa usebenzisa umzila, sinokutshintsha ii-ID nangaliphi na ixesha ukuthintela ukungena ngokungekho mthethweni kwinethiwekhi. Oku kuyakwenziwa ukuseta kwakhona i-router kwaye ungene kwi-passkey entsha ngokhetho.
Ukuseta kwakhona i-router kubambe isitshixo sokusetha kwakhona kwimizuzwana embalwa kwaye i-router iya kuphinda ibuyiselwe kwimeko yayo yokungagqibeki yefektri. Ngoku, unokutshintsha useto olungagqibekanga kwaye usete ii-IDS zokungena ozikhethile.
Izixhobo zenethiwekhi zizinze kwidilesi enye ye-IP emiselweyo; umzekelo, ii-routers ze-Linksys zihlala zabelwa idilesi ye-IP ye 192.168.1.1. Idilesi ye-IP emiselweyo igcinwa ingonakaliswanga ngabathengi abaninzi isenokutshintshwa ukuze ifaneleke ngakumbi kuyilo lwenethiwekhi oluntsonkothileyo. Ndwendwela isango elingagqibekanga kunye nedilesi ye-IP.
Igama elingagqibekanga Idilesi ye-IP idilesi echaza kwidilesi ethile ye-IP ye-IP odityaniswe kuyo kwaye uzama ukungena ngemvume. Iyafuneka kulo naliphi na ishishini okanye uthungelwano lwasekhaya.
The Idilesi ye-IP emiselweyo umzila kubalulekile ukuba wandise ujongano lwewebhu yomzila ukufikelela kwipaneli yolawulo kunye noseto lwenethiwekhi. Unokungena ngokulula kuseto lwenethiwekhi emva kokubhala le dilesi kwisikhangeli sewebhu kwibar yedilesi.